घर घरमा पत्रिका बाड्ने काम गर्थें : गायक कमल बि.सी.माल्दाई | मेरो नेपाल अनलाइन
Home दर्शन/संस्कृति घर घरमा पत्रिका बाड्ने काम गर्थें : गायक कमल बि.सी.माल्दाई
घर घरमा पत्रिका बाड्ने काम गर्थें : गायक कमल बि.सी.माल्दाई
Posted By: kamal bcon: ०८ असार, २०७४ In: दर्शन/संस्कृति, फोटो ग्यालरी, मनोरञ्जन, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, समाचार, स्थानियNo Comments
युवा लोक तथा दाहोरी गायक कमल बि.सी. माल्दाईको जीवन संघर्ष अरुको भन्दा अलि बेग्लै पृथक खालको छ । पत्रकारिता क्षेत्रबाट कलाकारिता क्षेत्रमा आएका गायक बि.सी. बर्दिया जिल्लामा जन्मिएका एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार हुन । कक्षा १० सम्मको औपचारिक अध्ययन सकेर उनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न मध्यपश्चिमको ठुलो शहर नेपालगंज पसे ।
त्यहा उनी एउटा सानो कोठा भाडामा लिएर एकजना साथीसंग बस्न थाले । मध्यम परिवारमा जन्मिएकाले पनि उनलाई नेपालगंज जस्तो ठुलो शहरमा बसेर अध्ययन गर्न निकै कठिन थियो । बुवा आमाले घरबाट पठाएको पैसाले कोठाभाडा सम्म तिर्न मुस्किल हुन्थ्यो कलेजको फि तिर्न त परैको कुरा रह्यो । भर्खरै नेपालगंज अध्ययन गर्न छिरेका बिसी आर्थिक समस्याले सताएपछि केही समय कलेज नै नगएको कुरा बताउछन ।
अन्ततः उनलाई संगैका एकजना साथीले पत्रिका बाड्ने काम खोजेर लगाएईदिए । पत्रिका बेचेर कमाएको पैसाले अलिकति भए पनि फि तिरे पछी उनी फेरी कलेज जान थाले र आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन थाले । उनले अध्यन गरेको कलेज नेपालजंगको आदर्श उच्च माबिमा हो । त्यति बेला गायक बिसीले झण्डै १ बर्षजति त्यहाँको स्थानीय पत्रिका नेपालगंजका घर घरसम्म पुर्याउने काम गर्दै अध्यन सहित कलाकारिता गर्दै आए ।
एटलस् साईकलमा पसिना चुहाँउदै नेपालगंजको चर्को गर्मीमा सबैको ढोका ढोकामा पत्रिका बाँडेको अझैं पनि दिमाखमा र मनमा ताजै सम्झना रहेको बताउछन बि सी । आज त्यो दुखले मलाई काठमाडौं सम्म पुर्याएको हो, उनी भन्छन, त्यतिबेला आमाको नाकको फुली बेचेर कलेजमा नाम लेखाएको थिए ।
अहिलेसम्म उनले झण्डै ४ दर्जन बढी गीतहरुमा आफ्नो स्वर दिईसकेका छन् । उनले गाएका गीतहरुमध्ये “भगवानलाई झुक्ने गराउँछु”, पाँच एकाने पाँच, काँकरीको झालैमा लौका फलेको, हल्का दारी जुंगा पालेको, बुढी रिसाउँछे, रुँदै धरधर बोलका चर्चित गीतहरु हुन् ।
गायक बि.सी. हाल राजधानीमा रहेर आफ्नो अध्ययन संगै कृयाशिल रुपमा कलाकारिता पनि गर्दै आएका छन् । उनको आफ्नै म्युजिक कम्पनी बागेश्वरी म्युजिक कम्पनी पनि रहेको छ ।
बहुप्रतिभाशाली गायिका सीता बोहराको पहिलो तीज गीत (झुम्का लाउली..) को अडियो गीत सार्वजनिक
बर्दियामा को अगाडि , को प्रतिस्पर्धामा ?